Et si ... internet était l'image de la démocratie. : comments » What if ...
Sunday, December 12, 2010 - 16:50:51
Fifaliana ho an’i What-if ny miarahaba tena nahatratra ny tsingerin-taona fahatelo nisiany androany 12 desambra 2010. Misaotra eram-po eran-tsaina anareo mpamaky nitsidika ny takelaka nandritra izay enina amby enim-polo sy arivo andro izay. Dia mba miangavy anareo mpitsidika mba hametraka kely fanamarihana fiarahabana sy firariantsoa mba hitohizan’ny bolongana.
Sunday, December 12, 2010 - 21:43:55
Dia faly miarahaba anao izany noho ny nahazoan’ny bolonganao tombontaona vaovao indray! Dia mirary soa mandrakariva!
Sunday, December 12, 2010 - 22:34:00
zany hoe sur facebook aloha, izany hoe olona afaka mampiasa solosaina, dia tsy maintsy hoe olona manana tombony @ i tgv na hoe connaissances na hoe tena fahavalo be an’i dada, anti-dada pur et dure… ihany no tena manohana an’i tgv ee zany hoe personelle ny antony…
Sunday, December 12, 2010 - 22:34:54
ary otran’ny misy olana ara-teknika an ^:^
Sunday, December 12, 2010 - 22:35:35
ary iza no gasy be namana/mpanaraka indrindra ao @ fb kay?
Sunday, December 12, 2010 - 22:36:16
farany tena farany:
ho tratry ny maro mitsingeringerina
Monday, December 13, 2010 - 10:06:10
Dia izao koa no fanadihadiana adino tamin’io, rehefa atambatra amin’ny isan’ny mpankahala ilay sympathisants dia midina miiba ny an’ny sasany.
Ohatra : Ratsiraka,Zafy Albert,Ravalomanana&co aux oubliettes: 27 (dia atao hoe mahazo -9 avy zany ohatra)
Against racism, against Zafy Albert : 69, dia ilay +75 an’i Zafy teo zany lasa miiba telo, Ratsiraka lasa miiba valo.
Anti-Andry TGV: 1227, lasa miiba iraika amby sivifolo sy roanjato
Ny an-dRavalo kosa no somary diso kajy fa hay misy Page 2 ny an-dRavalo, ka mbola tokony hiampy 2824 io tarehimarika io, dia avy eo vao hanalana 461, mpikambana ao amin’ny vondrona “Ravalomanana doit être jugé et condamné pour ses crimes”.
Dia inona ilay olana ara-teknika ry simp fa nisy fanavaozana mantsy ity blaogy ity talohaloha kely teo, sao misy tokony hahitsy?
Tuesday, December 14, 2010 - 01:37:38
rehefa mampiditra hevitra dia misy hadisoana mitranga eo fa tsy miverina @ ilay pejy misy an’ilay hevitra…
tafiditra ihany anefa ilay hevitra rehefa jerena avy eo an…
Tuesday, December 14, 2010 - 01:38:23
Ity ilay hadisoana:
Notice: Undefined index: url in /homez.165/dotmg/www/what-if/fp-plugins/lastcoms/plugin.lastcoms.php on line 120
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homez.165/dotmg/www/what-if/fp-plugins/lastcoms/plugin.lastcoms.php:120) in /homez.165/dotmg/www/what-if/fp-includes/core/core.wp-pluggable-funcs.php on line 273
Tuesday, December 14, 2010 - 12:13:35
Tokony ho efa mety amin’izay io zavatra io fa efa namboarina.
Misaotra amin’ny fiaraha-miasa.
Tuesday, December 14, 2010 - 16:26:16
Tuesday, December 14, 2010 - 16:27:44
ary tsy azo ovaina atao miniscule anga ny hevitra?
ilay lohateny sy ny hoe ps mety tsara ra majuscule fa le hevitra otran’ny mivandravandra be kle… indrindra moa ra somary lavalava :-)
Tuesday, December 14, 2010 - 16:37:22
hadisoana teknika kely tao anatin’ny hevitra iny, efa voahitsy. :)
Taratasy misokatra »
« Raha toa moa ka ... tanisa, fanisa